အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် PPP ခွင့်လွှတ်နိုင်သောချေးငွေအခွင့်အလမ်းများ• DT2 • Downtown Dutchtown • Downtown Dutchtown ၏အနာဂတ်အတွက်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် PPP ခွင့်လွှတ်နိုင်သောချေးငွေအခွင့်အလမ်းများ
အပေါ် Posted ဖေဖော်ဝါရီလ 23rd, 2021
မနေ့က Biden အုပ်ချုပ်ရေးမှအုပ်ချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုကိုကြေငြာခဲ့သည် လစာအကာအကွယ်ပေးရေးအစီအစဉ် (PPP) သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများချေးငွေများပိုမိုကောင်းမွန်သောကူညီဖို့ကူညီပေးဖို့ခွင့်လွှတ်နိုင်သောချေးငွေအစီအစဉ်။ နည်းဥပဒေအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လျှောက်လွှာများကို ဦး စားပေးသည့် ၂ ပတ်ကြာသည့်အထူး ၀ င်းဒိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊
အတိုချုပ်ပြောရရင်သင်ဟာတစ် ဦး တစ်ယောက်တည်းစီးပွားရေး၊ တစ်ယောက်တည်းပိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဒါမှမဟုတ်လွတ်လပ်တဲ့ကန်ထရိုက်တာတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ PPP ချေးငွေရဖို့သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပဲ။ သင်လိုအပ်သမျှသည်သင်၏ 2019 သို့မဟုတ် 2020 အခွန်ရှင်းတမ်းမှသင်၏ဇယားကို C နှင့်လျှောက်ထားရန်ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်း (အကောင်းဆုံးသောသင့်ဘဏ်) ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏စီးပွားရေးတွင် ၀ န်ထမ်းအယောက် ၂၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းပါကသို့မဟုတ်သင်တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ လွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်တာသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်သည်အထူး PPP လျှောက်လွှာကိုရရှိနိုင်သည်။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များကိုပိုမိုရန်ပုံငွေပိုမိုရရှိစေရန်ရန်ပုံငွေပုံသေနည်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
PPP ချေးငွေကိုသင်ရရှိပြီးဖြစ်ပါသလား၊ မရှိလျှင်ဤပြိုင်ပွဲကိုသင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ၂၀၂၀ ၏မည်သည့်သုံးလပတ်တွင်မဆို 25 မှ ၀ င်ငွေ၏ ၂၅% နှင့်အထက်အရှုံးကိုသင်ပြနိုင်ရပါမည်။
ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရသည့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက်ဖြေလျှော့ပေးခြင်း
အဘယ်မှာရှိ Apply ရန်
သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားမှာသင်ဘဏ်တစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိပါကသင့်ဘဏ်သို့ချဉ်းကပ်ရန်ဖြစ်သည်။ မင်းမှာဘဏ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေကကြိုက်တယ် Justine Peterson သင့်အားဘဏ်များသို့မဟုတ်အခြားရန်ပုံငွေရင်းမြစ်များသို့သင့်ကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်န်ဆောင်မှုများ Biz2Credit သင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရန်ပုံငွေရရှိရန်ကူညီနိုင်သည်။
ကာရိုးတန်ဘဏ် PPP ချေးငွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်လျှောက်ထားသောအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးသည်။ သင်ကအခြားချေးငွေနှင့်လျှောက်ထားသော်လည်းပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုမရရှိလျှင်သို့မဟုတ်သင်ယခင်လျှောက်လွှာတွင်ငွေချေးခြင်းကိုငြင်းပယ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်သူတို့ကကူညီနိုင်သည်။ Nikki Woelfel ကို 314-347-9671 သို့ဆက်သွယ်ပါ nikkiwoelfel@carrolltonbanking.com, ဒါမှမဟုတ် 314-346-6310 မှာ Suzanne Hough သို့မဟုတ် suzannehough@carrolltonbanking.com.
ဘယ်လို Apply ရန်
အမြန်ဆုံးလျှောက်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ လျှောက်လွှာကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်စတင်ပါမည်။ သင်လျှောက်ထားသောအခါသတင်းအချက်အလက်အချို့စုဆောင်းရန်လိုအပ်သည်။
မင်းမှာ ၀ န်ထမ်းတွေရှိရင်
၀ န်ထမ်းအယောက် ၂၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များအတွက်အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစွာစုဆောင်းပါ -
IRS သည် ၉၄၀ နှင့် ၉၄၁ တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
သင်ဟာတစ် ဦး တည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ လွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်တာတစ်ယောက်၊
ငွေပြေစာများ၊ ဘဏ်ရှင်းတမ်းများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးကိုပြသသည့်အခြားမှတ်တမ်းများသည် ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်တွင်စတင်သည်
PPP ချေးငွေများကိုများသောအားဖြင့်ခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကတစ်နှစ်လျှင် ၁% အနိမ့်ဆုံးအတိုးနှုန်းကိုသင်ရနိုင်သည်။ PPP ၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းအစီအစဉ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ချေးငွေသည်ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ထက်နည်းလျှင်၊ သင်မျှမျှတတရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံ 150,000-S ကိုဖြည့်ရန်လိုလိမ့်မည်။ သင်၏ငွေချေးသူသည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုလမ်းညွှန်ရန်ကူညီသင့်သည်။
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းပေါ်သို့တစ်နှစ်ခန့်ချိတ်ဆွဲထားသည်။ နေရာတိုင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ရုန်းကန်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့များကိုမျှော်ကြည့်နေစဉ်တွင်သင်၏စီးပွားရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဤအချက်အလက်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များကိုဤစာမျက်နှာသို့သွားရန်သူတို့ကို ပြော၍ ရည်ညွှန်းပါ dutchtownstl.org/grants။ နှင့်သင်၏သင်၏သူချင်းရပ်ကွက်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းပါ Dutchtown စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ Facebook အုပ်စု PPP ချေးငွေများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပွင့်လင်းစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အခြားအရာများနှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ကူညီရန်
အောက်မှာ Filed စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား နှင့် Covid-19. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဖေဖော်ဝါရီလ 23rd, 2021 .
DT2 • Downtown Dutchtown စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် PPP ခွင့်လွှတ်နိုင်သောချေးငွေအခွင့်အလမ်းများ
DT2 ရှာဖွေပါ• Downtown Dutchtown
DT2 • Downtown Dutchtown အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်